China 16/19/24 I-intshi yeBhowl yeLeaf Bud Trimmer Factory Supply Twisted Trimmer factory and suppliers | Virex
Isitya sethu se-Twisted spin bud leaf trimmer sidibanisa amandla ezikere ezingama-30 kwisisiki esi-1 ukuze sicoceke kwaye sisebenze kakuhle ngelixa sinciphisa umonakalo kwizityalo. Imicu yerabha yomgangatho wokutya inokuphatha izityalo ngokufanelekileyo ngokhathalelo oluthambileyo kunye nokunciphisa ukunamathela kwentsalela ngexesha lokusetyenziswa, ikhuselekile kwaye akukho ntyatyambo yonakaliswe. Sibonelela ngeencakuba zentsimbi ezibukhali ukuze sikhonze iimfuno zakho ezahlukeneyo zokuthena. I-blade ethe tye yenzelwe ukuchetywa kwezityalo ezimanzi, ngelixa i-blade yocingo "X" isetyenziselwa isityalo esomileyo. Siyathemba ukuba uya kuwuthanda umgangatho wethu.
I-1, amaxesha angama-30 ngokukhawuleza kunesikere
I-2, Ukusika ngokukhawuleza nangokufanelekileyo
3, kulula ukuyisebenzisa kwaye kulula ukuyiphatha
I-4, ikhuselekile kwaye akukho monakalo weentyatyambo
I-5, kulula ukuyicoca emva kokusetyenziswa
Igama lemveliso 16inch 19inch kunye 24inch Factory Direct Supply Gardenhouse Greenhouse Hydroponic System Bud Ukucheba Machine Bowl Bud Leaf Trimmer
Ubungakanani 16intshi, 19intshi, 24intshi
Imihlubu Irabha kunye neSilicone
Umbala womcu Mnyama, obomvu, omfusa, oluhlaza kunye noorenji
Ibhokisi yegiya Isinyithi kunye nePlastiki
Blade I-1 *i-blade ethe ngqo kunye ne-2 * yocingo olunqamlezayo
1. Sinikezela nge-OEM / ODM.
2. Siyayamkela iodolo encinci.
3. Sibonelela ngenkqubo yenkonzo emva kokuthengisa.
4. Yonke imveliso yethu iya kuvavanya ngononophelo lisebe lethu le-QC ukuqinisekisa ukuba umgangatho kwizinga eliphezulu.
A: Iqela lokuhlola umgangatho wemveliso liqinisekisa izinga eliphosakeleyo leodolo; ngaphandle koko, siya kuthatha uxanduva olupheleleyo ngokwenkqubo yethu yenkxaso emva kokuthengisa.
A: Umthamo wemveliso yomzi-mveliso wethu ziiyunithi ezili-1000 zezilungisi zamagqabi ngenyanga.
Q5: Ndingayifumana njani iKhathalogi yakho kunye noluhlu lwamaxabiso?
Q6:Uzithumela njani iimpahla? Ingaba iza kuthatha ixesha elingakanani?
A: Ngokuqhelekileyo nge-express, ulwandle kunye nomzila. Amazwe ahlukeneyo anemida yamaxesha ahlukeneyo. Ngokuxhomekeke kukhetho lwakho, i-express idla ngokuthatha malunga neentsuku ezi-5-7, ulwandle kunye nololiwe kuthatha malunga neentsuku ezingama-25-45.
Ngaphambili: Igqabi loMbane leBud Trimmer yeGadi yeGreenhouse Hydroponic Trimming Machine
Okulandelayo: I-Spectrum egcweleyo ye-LED Ukukhanya okuPhakamileyo okuPhakamileyo koLawulo oluBukrelekrele kuYilo lokuKhula kokukhanya kwe-LED
Leaf Leaf Bud Trimmer Gardenhouse Greenhouse Hyd...
Ukucheba Amandla eNqanaba leBud Ukucheba Amandla okhula ...